Mas'uuliyiinta Sarsare Ee Soomaaliya Ee Haysta Labada Jinsiyadood
Thursday June, 04 2020 - 07:14:33
Friday August 02, 2019 - 16:43:03 in by salman abdi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay
sheegay in uu si rasmi ah isaga celiyay jinsiyadiisii labaad ee Maraykanka, uuna ku ekaan doono tan Soomaaliga. Wuxuuna wixii hadda ka dambeeya kaliya isticmaali doonaa baasaboorka Soomaaliga.
9 dal oo kaliya ayaa fiiso la'aan lagu tagi karaa baasaboorka Soomaaliya, halka kan Maraykanka lagu tagi karo 115 dal adiga oo aanan qaadan wax dal ku gal ah.
Tiro aad u badan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xilalka ugu sareeya ka haya dowladda Soomaaliya iyo waliba shaqaalaha rayidka ayaa haysta dhalashooyinka dalal shisheeye oo u badan kuwa reer Galbeedka.
Shabakada daahfurnaanta arrimaha dowladda wanaagga ee Wakiil ayaa tirakoob ay samaysay waxa ay ku sheegtay in 105 xildhibaan oo ka mid ah labada Aqal ee baarlamaanka ay heystaan baasabooro ajaaniib ah
Sida laanta fulinta, Ra'isulwasaare Xassan Cali Kheyre oo ugu sareeya xukuumadda waxa uu heystaa dhalasho Norway ah iyo ku xigeenkiisa Mahdi oo heysta baasaboor Itoobiyaan ah.
Xagga garsoorka iyo ciidamada , waxaa la sheegay in mas'uuliyiinta qaar ay heystaan dhalashooyin dalal kale.